I-Wuxi Tecfree International Isekelwe eWuxi, empumalanga yeChina, eduze kakhulu neShanghai. singomunye wabaphakeli abakhethekile abagxile kwizisombululo zokushisa ukushisa kanye ne-muffler esetshenziselwa imishini yokwakha nemishini yezimboni .Sisungulwe ngo-2009, sinikela ngenkonzo yethu kumakhasimende womhlaba wonke kusukela lapho.
Sinokuqonda okuhle emihlanganweni yamakhasimende nezicelo ngesipiliyoni sethu nolwazi lwasemuva.
Imikhiqizo yethu ithunyelwe eYurophu, eNdiya, e-Australia, e-Israyeli, eKorea njalonjalo, iwine ukwethenjwa emhlabeni jikelele, lolu kholo lusigcina siqhubeka njalo. Siyajabula ukubona imishini eminingi futhi ifakelwe ama-coolers & radiators noma ama-mufflers ethu
Isicelo sethu sinwetshelwa emotweni yezokwelapha neyesiqandisi futhi, sisebenza kubuchwepheshe obusha ukuthuthukisa ukusebenza nokubaluleka. Amalungu ethu e-R & D ayakujabulela ukuba se-yr service.
Ifektri yethu iseduze neTi lake, abanamakhono angama-55workers abanamakhono aphelele, sinezinto ezifana nesithando somlilo, umshini we-Fin, umshini wokusika we-laser, umshini wokugoba othomathikhi njll.
ukukhiqizwa okusekelwe ohlelweni lwe-ISO9001 .Amanethiwekhi wokuhambisa umoya noma ulwandle kulula kakhulu futhi kushesha.
Eminyakeni embalwa edlule ukusungulwa kwenkampani, besilokhu sinamathela kumgomo wokuthi "ikhasimende kuqala, insizakalo eqotho yokujabulisa amakhasimende, ngomgomo" othembekile nokwethenjwa, ikhasimende kuqala ", futhi ngokuya ngemikhiqizo, thina bathathe "okusemqoka okusezingeni eliphezulu, ubuhle" njengenqubo yethu ejwayelekile, balwela ukuhlinzeka abathengi ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu, ngasikhathi sinye, senze nokuthi inkampani yathuthukisa isikhathi eside
sizokwenza okuningi futhi senze kangcono emasimini ethu, silindele ukuthola imibuzo nemibuzo Esikhathini esizayo.